Niyad wanaag oo sii aamina. Waxyaabo ka fiican ayaa ka horreeya. - qarsoodi - Quotes Pedia
Niyad wanaag oo sii aamina. Waxyaabo ka fiican ayaa ka horreeya. - Qarsoodi
In hore loo socdo marxaladda dhibaatada waxay noqon kartaa mid adag laakiin dadka ka adkaan kara cabsidooda oo horay u socotaa ayaa ah kuwa si guul leh ugu soo baxa. Waxaad ubaahantahay inaad yeelato maskax cad markii jahwareer jiro.
Waxaad ubaahantahay inaad is istaagto nafsadaada iyo kuwa kale oo badan oo iyaguna caawimaad u baahan. Noloshu waxay kugu tuuraysaa caqabado. Waa lama huraan laakiin in la awoodo in qofku sameeyo liin-dhir marka noloshu ku siiyo liin waa waxa kaa caawinaya inaad ka soo baxdid dhibaato. Tan waxaa inta badan lagu kiciyaa tamar wanaagsan iyo rajo ah in wax wanaagsan ay dhici doonaan.
Waxaad ubaahantahay inaad naftaada ku kalsoonaato oo aad fahanto inaad heli doontid awood aad kula dagaallanto waxa soo socda. Waxaad noqon doontaa dagaal oo waxaad dhiirigelin doontaa kuwa kale. Wadajir, rajadu waxay naga caawin doontaa inaan hore ugu dhaqaaqno bulsho ahaan.
Xitaa nolosha shaqsiyeed, wixii duufaano ah ee soo mara dariiqaaga, ogaada in 'tan sidoo kale ay dhaafi doonto' Kaliya waxaad ubaahantahay inaad ilaalisid xalinta iyo isku xirnaanshaha oo aad horay usii socoto Had iyo jeer u fikir in wax fiican oo mustaqbal ku yaal oo rajo ka hel fikirkaas aad u xun.
Naftaada iskaga ilaali dadka wanaagsan iyo kuwa dhabarkaaga lahaa markii ay arrintu adkaato. Aqri buugaag ka yimid qoraayaasha wax garadka ah oo kaa caawinaya inaad laqabsato fikradahaaga. Tani waxay kabin doontaa xooggaaga waxayna kaa caawin doontaa inaad noloshaada hore u sii fiiriso.
Inaad wanaagsanaato waxay ku siineysaa rajo waxayna ku siinaysaa awood aad ku jeexdo xadkaaga. Waxay yareysaa cabsidaada waxayna kuu ogolaaneysaa inaad isku daydo suurtagalyo kaa saari doona xaalada. Tani waa waxa aakhirka u horseedaya xal oo aan ku guuleysanno looga gudbo dhibaatooyinka, hore usocodka nolosha.
Soo Jeedinta Horta
Rumaynta Naftaada Quotes
Aayadaha Rumaysiga iyo Hadallada
Xigashooyinka berrito ka wanaagsan
Helitaanka Horusocodka Quotes
Hayso Aayadaha rumaynta
U fiirso xigashooyinka hordhaca ah
Sug joogtada xigasho
Waxaad tahay meeshaad mudan tahay inaad joogtid xilligan xaadirka ah. Khibrad kastaa waa qayb ka mid ah qorshaha Ilaah ee rabaani ah. - Qarsoodi
Kulligeen waxaan nahay caruur ilaahay swt. Ilaaha Qaadirka ahi wuxuu leeyahay awood uu wax kaga beddelo adduunkan…
Saaxiibbada wanaagsan way adag tahay in la helo, way adag tahay in laga baxo, waana wax aan la ilaawi karin. - Qarsoodi
Saaxiibbada wanaagsan way adag tahay in la helo, way adag tahay in laga baxo, waana wax aan la ilaawi karin. - xigashooyinka aan la aqoonsanayn:
Laba shay ayaa qeexaya: Sabirkaaga markii aadan waxba haysan iyo dabeecaddaada markii aad wax walba haysatid. - Qarsoodi
Noloshu waxay ina siinaysaa caqabado iyo hadiyado u gaar ah. Safarkayagu caafimaad buu keenaa. Dhamaan arrimahan oo dhan,…
Berrito weligiis lama ballanqaadi karo, sidaa darteed maanta waxaan rabaa dhamaan asxaabteyda iyo qoyskeyga inay ogaadaan sida aan ugu mahadcelinaayo in dhamaantiin nolosheyda ku jiraan. - Qarsoodi
Berrito weligiis lama ballanqaadiyo, sidaa darteed maanta waxaan doonayaa dhamaan asxaabteyda iyo qoyskeyga inay ogaadaan sida aan ugu mahadcelinayo…
Raali-gelintaadu waxay u baahan tahay inay u weynaato sida ixtiraam la’aantaada. - Qarsoodi
Run ahaantii waxaa jira odhaah caan ah oo sheegaya in qaladku yahay bina aadam. Taas macnaheedu waa in aadanuhu xayiran yahay…